नेपालको दुग्ध क्षेत्र सक्षम छ, एफडीआई चाहिँदैन
सरकारको नारा निकै गज्जबको छ, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ । तर, केन्द्रीय बहसको विषय भने समृद्धिका मुद्दाभन्दा पनि राजनीति नै रहँदै आएको देखिन्छ । नाम मात्रको प्रतिपक्ष र टालटुले प्रवृत्तिका सत्ता सञ्चालकका राजनीतिक स्वार्थमा रुमल्लिएको क्षेत्र हो— कृषि क्षेत्र । मल, बीउ, सिँचाइदेखि प्रविधिसम्ममा समस्या र उत्पादित वस्तुको बजारको ग्यारेन्टी नहुँदा सबैभन्दा पीडित यही कृषिक्षेत्रमा संलग्न ६६ प्रतिशत हाराहारीका जनसंख्या छन् । कृषिमा पनि पछिल्ला वर्षमा सबैभन्दा बढी चुनौतीको सामना गरेको क्षेत्र हो दुग्ध क्षेत्र । वार्षिक उत्पादन वृद्धिदर ४ प्रतिशत र माग ८ प्रतिशतले बढिरहेको यो क्षेत्र अर्थतन्त्रका लागि पनि उत्तिकै महत्व राख्ने क्षेत्र हो । कहिले कोलीफर्मको नाममा, कहिले गुणस्तरहीन पाउडरको नाममा, कहिले मिल्क होलिडे र कहिले उत्पादनले बजार नपाउने समस्याको बहानामा दुग्ध क्षेत्रमा संलग्न किसानदेखि उद्योगी र उपभोक्तासम्म त्रसित बन्नुपरेको छ । पछिल्लो आधा दशकदेखि नेपालको दुग्ध क्षेत्रलाई नै किन असफल बनाउने कोसिस भइरहेको छ भन्ने विषय अब भने सतहमै आएको छ । यस विषयमा खुलेरै मिडियामा पनि चर्को बहस हुने गरेको छ । सरकार भन्छ, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँछौं । युवाहरूलाई कृषिक्षेत्रमा आकर्षित गरेर खाडी जाने बाध्यताबाट मुक्त बनाउँछौं, बिदेसिएका युवा स्वदेश फर्काएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाएर जनताको आर्थिक अवस्था सुधार्छौं र देश समृद्ध बनाउँछौं भन्ने भनाइ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीदेखि संसदहरूसम्मबाट सुनिँदै आएको छ । प्रतिपक्षका सांसदका चर्का भाषण पनि निकै सुन्न लायक हुन्छन् । तर, आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि मुलुकलाई जस्तोसुकै घाटा पर्ने काम पनि मिलेर गर्ने अभ्यास पनि नेपालका राजनेताहरूमा देखिएकै हो । छिमेकी मुलुकको निकै सफल मानिएको बहुराष्ट्रिय कम्पनी अमूललाई नेपाल भित्र्याउनमा नेतादेखि संसद्सम्म संलग्न रहेको खबर यसअघि पनि बाहिर नआएका होइनन् । तर, पछिल्लो पटक संसद्मा पेस भएको ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नपाइने क्षेत्रको सूचीबाट दुग्ध क्षेत्रलाई हटाउनु शंकास्पद मात्र होइन, उच्च ओहोदाका नेता, मन्त्रीहरूको चलखेलका रूपमा बुझ्न गाह्रो छैन । दूध मात्र हटाउँदा शंका हुन्छ भनेर दूधसँगै मत्स्यपालन र महसमेतलाई हटाएर चोरको खुट्टा काटभन्दा खुट्टा उचालेजस्तो प्रस्टै भएको छ । कृषि, कानुन, उद्योग र अर्थमन्त्रालयसमेतले विधेयकको अनुसूचीमा कुखुरापालन, मह, मत्स्य र दुग्ध क्षेत्र राखेकोमा संसद्मा पेस पेस हुँदा कसरी गायब भयो ? अहिलेको अनुत्तरित प्रश्न हो यो । पछिल्लो समयमा बहसमा रहेको दुग्ध क्षेत्रमा विदेशी लगानीको विषयमा केन्द्रित भएर सरोकारवालासँग कारोबारकर्मी किरण आचार्यले गरेको कुराकानीको सार :
भारतीय सरकार र अमूलले पुनर्विचार गर्नुपर्छ
अध्यक्ष, डेरी उद्योग संघ
डेरी क्षेत्र एउटा उद्योग वा किसानले मात्र सञ्चालन गरेर चल्ने क्षेत्र होइन । दुग्ध उत्पादनदेखि वितरणसम्मको प्रक्रियालाई ‘गोठदेखि ओठसम्म’ भन्ने नारा नै छ । अर्थात् डेरी क्षेत्र सञ्चालन गर्न दुग्ध मूल्य श्रृंखलाको आवश्यक पर्छ । त्यसैले डेरी क्षेत्रमा किसान, उद्योग, उपभोक्ता र सरोकारवाला सबै पात्रको उत्तिकै महत्व हुन्छ । सबै पात्रको प्रयासबाट मात्र यो क्षेत्र चल्ने हो । र, सबै पात्रको ठूलो लगानीको क्षेत्र हो— नेपालको डेरी क्षेत्र । हामी उद्योग स्तरमा मात्र ३० अर्बको लगानी भएको भन्दै आएका छौं । तर किसानले यस क्षेत्रमा गरेको लगानीको हिस्साको लेखाजोखा नै छैन । करिब ५ लाख किसान परिवारको प्रत्यक्ष संलग्नताको अनुमान गरिन्छ, तर वर्षौंदेखि दुग्ध क्षेत्रमा आश्रित संख्या निकै ठूलो छ । पूर्व इलामदेखि पश्चिमसम्मको दूध हामी उद्योगीले दूध संकलन गरेर ल्याउँछौं र प्रशोधन गरेर उपभोक्तासम्म पु-याउँछौं । नेपालभर दुग्ध क्षेत्रमा संलग्न सहकारी, दूध संकलक, थोक विक्रेता, खुद्रा विक्रेतादेखि घरघरमा दुग्ध पदार्थ बिक्रीसम्ममा कतिले रोजगारी पाएका छन् ? अध्ययन हुनै बाँकी छ । पत्रपत्रिकासँगै घरघरमा बिहान–बिहान दूधका पोका पुग्छन्, जुन नेपालको आफ्नै उत्पादन पनि हो ।
मुलुकले भुइँचालो र नाकाबन्दीको समस्या बेहोर्नुप-यो । ग्यास र तेलको अभावले धेरै उपभोक्ताले खाद्यान्न अभावकोसम्म सास्ती भोग्नुप-यो । तर, जस्तोसुकै कठिन अवस्थामा पनि किसानले दूध दुहुन छाडेनन्, हामी उद्योगीले उपभोक्तासम्म पु-याएका छौं । अन्य खाद्यान्नको मूल्य अकासियो तर दूधको मूल्य जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि बढाइएन । स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट चलिरहेको दुग्ध उत्पादनको क्षेत्र एकाएक नेपाल सरकारको आँखामा किन बिझायो ? किन यो क्षेत्रलाई धराशायी गर्ने खालको विधेयकमा पेस भयो ? दुग्ध क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने मनसायको विधेयक संसद्मा पेस हुुनुले हामी निकै मर्माहत भएका छौं । दुग्ध क्षेत्र दूध दुहुने किसानसँग मात्र जोडिएको क्षेत्र पनि होइन । गाईंभैसी पालनबाट आउने मलमूत्रसम्मको उपयोगले कृषि उत्पादनको अन्य क्षेत्रलाई पनि योगदान गर्ने क्षेत्र हो ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा मुख्य भूमिकामा रहने कृषि क्षेत्रको पनि आधारभूत उत्पादनको क्षेत्रका रूपमा रहेको दुग्ध क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउने कुरा मुलुककै लागि घातक विषय हो । अर्थतन्त्रमा ९ प्रतिशत योगदान रहेको यो क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी खुला गर्ने व्यवस्थाले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पर्न जान्छ भन्ने कुरो सबैले बुझ्नु जरुरी छ । भारतीय कम्पनी अमूलले नेपाल र श्रीलंकामा प्रशोधन उद्योग खोल्ने निर्णय पहिले नै गरिसकेको हो । यसैलाई भित्र्याउने प्रयासस्वरूप संसद्मा पेस गरेको विधेयक हो । यो गम्भीर विषय हो । सम्माननीय सांसदहरू र सरकारका उच्च अधिकारीहरूले ध्यान पक्कै पनि जानेछ भन्ने लाग्छ ।
हामी उद्योगी विश्वस्तरको गुणस्तरीय उत्पादन दिन हामी सक्षम छौं । विदेशी लगानी भित्र्याउने मनसायको विधेयक सच्याइयोस् । अमूल र भारतीय सरकारलाई पनि अनुरोध छ, कृपया तपाईंहरूलाई लगानी गर्न विश्वभर सयौं मुलुक छन्, नेपालको दुग्ध क्षेत्रलाई आफ्नै हिसाबले चल्न दिनुहोस् । यो वा त्यो नामबाट नेपालको दुग्ध क्षेत्र धराशायी पार्ने खेल बन्द गरिदिनुस् । असल छिमेकीको भूमिका निर्वाह गरिदिनुहोस् ।
एफडीआई ल्याइए कृषक, उद्योगी दुवै डुब्छौं
उपाध्यक्ष, वस्तुगत समिति, नेवाउसंघ
कुनै पनि सरकारले मुलुकमा तीनवटा कुरा हेर्ने गर्छ । राष्ट्रमा कति मैले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छु, मैले खाद्य सुरक्षाको कुरालाई कति सम्बोधन गर्न सकेको छु र आर्थिक वृद्धिको हिसाबले कति कुरा गर्न सकेको छु भन्ने विषय कुनै सरकारका मुख्य प्राथमिकता हुने गर्छन् । र, दुग्ध क्षेत्र यी तीनै दृष्टिकोणबाट महत्व राख्ने क्षेत्र हो । डेरी क्षेत्रमा ५ लाख कृषकको प्रत्यक्ष संलग्नता छ भने रोजागारीका दृष्टिकोणले पनि २० हजार बढीले यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् । सरकारको मुख्य प्राथमिकता भनेको रोजगारी हो र दुग्ध क्षेत्रले ठूलो योगदान गरेको छ । दोस्रो संयुक्त राष्ट्रसंघ खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) ले एक स्वस्थ मानिसले वर्षमा ९२ लिटर दूध खानुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ र हाम्रो प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति दुग्ध उपभोग ७२ लिटर पुगिसकेको छ । दिनको एक गिलास दूध मात्र खान सक्नुभयो भने शरीरलाई चाहिने अधिकांश पौष्टिक तत्व पूरा गर्न सक्छ । त्यसैले दूधलाई आफैंमा पूर्ण खाद्य भनिन्छ । दैनिक साढे तीन करोड रकम सहरबाट गाउँ जाने क्षेत्र पनि दुग्ध क्षेत्र हो । यति ठूलो नगद प्रवाह दैनिक रूपमा गर्न सक्ने क्षेत्र डेरी नै प्रमुख क्षेत्र हो ।
दुग्ध क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन हुन्छ भन्ने विचार राख्ने समुदाय र सरकारलाई एकपटक दुग्ध क्षेत्रको यथार्थता बुझ्न अनुरोध गर्छु । १८ सय सहकारी संलग्न, जीडीपीमा ९ प्रतिशत योगदान रहेको यो क्षेत्रमा दुग्ध उद्योगमा मात्र ३० अर्ब लगानी छ भने उद्योगबाट मात्र वार्षिक १ अर्ब राजस्व सरकारलाई जाने गरको क्षेत्र पनि हो यो । यो तथ्यांकले पनि दुग्ध क्षेत्रको महत्व झल्काइरहनेको छ । साथै, यो आत्मनिर्भर उन्मुख क्षेत्र पनि हो भन्ने पनि सरकारलाई राम्रोसँग जानकारी छ । बच्चादेखि वृद्धसम्म, जन्मदेखि मृत्युसम्म आवश्यक पर्ने पोषकीय तत्व रहेको कृषि उपज दूध हो । यो क्षेत्रमा हामी आफैं (नेपालीहरूले) नै मेहनत गरेर आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख छौं । विगतदेखि सरकारले पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सहयोग गर्दै आएको छ । मेहनत गरेर आत्मनिर्भरताको सँघारमा रहेको क्षेत्रलाई डुबाउने गरी बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्र्याउने प्रस्ताव लैजाने माननीयको हात किन काँपेनन् ? किन यति गम्भीर विषयलाई क्षणिक स्वार्थसँग जोडेर बेवास्ता गरियो ? हामी साँच्चै नै दुःखित छौं । के हामी यति ठूलो लगानी गरेर स्थापित उद्योग छाडेर खाडी जानु ? सरकारी चाहना यही हो भने भनोस्, होइन भने दुग्ध क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई स्वागत गर्ने व्यवस्था कानुनमा राख्नु भएन । कमजोरी देखिए हामी उद्योगी सच्चिन तयार छौं, दुग्धको गुणस्तर बढाउन र उत्पादन लागत घटाउन हामी सरकार, सहकारी र किसानसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं । अझै लागिपर्नेछौं । विधेयक सच्याएर यो क्षेत्रलाई जोगाइयोस् ।
छल गरेर संसद्मा विधेयक पेस भयो
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ
हाल संसद्मा पेस गरेको विदेशी लगानीसम्बन्धी अध्यादेशमा राज्यले पोल्ट्रीभन्दा बाहेकका कृषिक्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन दिने खालको व्यवस्था गरिएको छ । यो आपत्तिजनक कुरा हो । विगतमा पनि दुग्ध क्षेत्रलाई यो वा त्यो नाममा जहिले समस्यामा पारिँदै आएको छ । हामीले कृषक, सहकारी र उद्योगको आपसी समन्वयमा यो क्षेत्रलाई सुधार गरेका छौं र गर्दै पनि छौं । उत्पादन बढ्दै जाँदा बल्ल हामी झोल दूध आयात गर्न नपर्ने अवस्थामा छौं । भोलिका दिनमा दुग्ध पदार्थ उत्पादन गर्ने थप दूध पनि यही उत्पादन गर्न सक्षम छौं हामी । तर, अध्यादेशलाई यही अवस्थामा पास गरियो भने भोलिका दिनमा सिधै दूध र दूध उद्योग नै यहाँ स्थापना गर्न सकिने अवस्था आउँछ ।
ठूलो जनसंख्या, ठूलो लगानी र सरकारले भारी मात्रामा अनुदान दिएर उत्पादन गर्ने भारतीय दूध सिधै ट्यांकरमा ल्याएर यहाँ प्रशोधन गर्ने अवस्था आउँछ । के यसरी नै हो मुलुक समृद्ध हुने ? पक्कै होइन । यसो हुँदा नेपालको दूधको मूल्य श्रृंखला नै खलबलिन्छ । यस्तो कदमले मुलुकका कृषकहरूको रोजिरोटी खोसिन्छ । यहाँ भइरहेका सहकारी पनि डुब्छन् । सानोदेखि ठूला उद्योग पनि बन्द हुन्छन् । यसरी यहाँका मान्छे गरिबमाथि गरिब हुने र बाहिरका मान्छे धनीमाथि धनी हुने हुन्छ । यस्तोमा सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी कृषिमा आउन रोक्नुपर्छ ।
कहिले कृषकले उत्पादन गर्ने दूधलाई कोलिफर्म भनेर फालियो, कहिले मूल्य नै नदिएर समस्यामा पारियो । अब यतिले मात्र नपुगेर विदेशी लगानी नै भित्र्याएर यहाँका कृषक, उद्योगी, उपभोक्ता सबैलाई समस्यामा पार्ने खेल राज्यबाट भएको छ । दूध उत्पादन बढी भएर बजार नपाउने समस्या समाधान गर्न तीनवटा पाउडर प्लान्ट राखियो । मिल्क होलिडे रोकियो । उद्योगलाई अझै दूध आवश्यक छ । युवाहरू पनि पशुपालनमा आकर्षित भइरहेका छन् । सरकारले गुणस्तर कायम गर्न निर्देशिकाहरू जारी गरेको छ । गोठदेखि ओठसम्म सुधारका कामहरू भइरहेका छन् । आत्मनिर्भर भई स्वेदशमै उत्पादन र प्रशोधन गरेर विदेश निर्यात गर्ने अवस्था ल्याउनुको साटो उल्टै स्वदेशी लगानी धरापमा पारेर बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्र्याउने खेलमा सरकारका उच्च ओहदाका अधिकारी लाग्नु निकै दुःखद् छ ।
अमूलजस्तो सक्षम यहाँको सहकारीलाई बनाउनुपर्छ, अमूल नै भित्र्याउने होइन । अमूल बनाउने त्यहाँको सरकारले सहयोग गरेर हो । यहाँको सहकारीले गरोस्, हामी अमूलभन्दा राम्रो गर्न सक्छौं । नेपाल सुहाउँदो गर्न सक्छौं । यसका लागि हामीले नेपाल र नेपालीको रुचि र चाहनाअनुसार काम गर्नुप-यो । विदेशीको चाहनामा यहाँको कल्याण हुँदैन । हामीले विधेयक तयार हुने बेलादेखि नै चासो राखेर दूधमा विदेशी लगानी रोक्ने विषयमा लविङ गर्दै आएका पनि छौं । कृषि, कानुन, उद्योग, अर्थ मन्त्रालयहरूले सूचीमा राखेको विषय संसद्मा पेस हँुदा कसरी हटाइयो । यसमा सरकार, प्रतिपक्ष र सत्ताधारी पार्टीका नेताहरूको संलग्नता देखिन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर प्रधानमन्त्री र संसद्ले भूमिका खेल्नुपर्छ ।